Deni oo sheegay in uusan ka qaybgeleyn Shirka golaha Amniga…
By axadle On Jul 1, 2020
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo ka hadlay Munaasabadda 1-da Luulyo oo lagu qabtay Magaalada Gaalkacyo waxa uu diiradda saaray xiisadda siyaasadeedka ee kala dhaxeyso DFS.
Madaxda Xukumadda waxa uu ugu baaqay in aysan dano siyaasadeed ka dhex eegan Doorashada dalka, taas oo sababi karta in mustaqbalka wadanka uu dhumo, sida uu hadalka u dhigay Hogamiye Deni.
“Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa aan ugu baaqayaa in uu iska ilaaliyo hoos isku qarin, iskana hor keenin Xildhibaannada siiyay fursadda uu Madaxweynaha ku noqday iyo Shacabka Walaalaha ah , joojiyana falalka ragaadinaya dhismaha dowladnimada Soomaaliyeed oo ay ugu horeyso hirgelinta Doorashada dalka” Deni.
Si cad ayuu u sheegay in uu u hoggaansan yahay go’aankii Baarlamaanka Dowlad Goboleedka Puntland 29-kii June 2020 ee ka dhanka ahaa kuraasta matalaadda ah ee lasiiyay Gobolka Banaadir.
Shirka Madaxweynaha uu ugu yeeray Muqdisho waxa uu xili ballameedkiisu yahay 5-8 Bishaan Luulyo 2020, waxaana ka horeeyay kulan ku qabsoomay Shirarka Muuqaalka fog (Video Conference) uu Hogamiye Farmaajo ku ballamiyay in waji ka waji ay u kulmi doonaan Madaxda Heer Federaal iyo heer Dowlad Goboleed.
Hogamiye Farmaajo oo Madaxda Dowlad Goboleedyada ka hadlay Shirka ay isugu imaanayaan.
Beesha Caalamka ayuu ugu baaqay in ay gacan ka geystaan badbaadinta Geedi socodka dalka, gaar ahaan Doorashada oo waqtigeeda lagu qabto, laguna dhameystiro waqti xileedka Madaxda Xukumadda Soomaaliya.
Dowlad Goboleedka Puntland ayaa dhaliilsan kuraasta 13-ka Senator ee matalaya Gobolka Banaadir, Golaha Wakiilada maamulkaas ayaa soo saaray go’aan ay ku sheegeen in aysan aqbali doonin.
Golaha Shacabka oo Ansixiyay 13-Senatar Aqalka sare ku matalaya Gobolka Banaadir.
Golaha Shacabka BFS oo ay ku jiraan Xubno kasoo jeeda Dowlad Goboleedka Puntland ayaa u codeeyay kuraasta matalaadda Gobolka Banaadir ee Aqalka sare ku yeelan doono, kadib markii ay u codeeyeen 142-Xildhibaan, halka ay diideen 4-Mudane.